China 94300A-New Hotel & Home Design Brass mposi ụlọ ịsa ahụ ngwa China soplaya ụlọ ịwụ ngwa 6 iberibe ụlọ ọrụ na-emepụta | Cavoli
Ilelọ mposi ahịhịa
94300A-New Hotel & Home Design Brass mposi ụlọ ịsa ahụ ngwa China soplaya ụlọ ịwụ ngwa 6 iberibe set
Isi Ebumnuche Ebumnuche
Opekempe iji ibu
Aha ngwaahịa New Hotel & Home Design Brass mposi ụlọ ịwụ ngwa ngwa China soplaya ụlọ ịwụ ngwa 6 iberibe set
Nkọwa SIX PC KWU
Nọmba nlereanya 94300A
Nwunye / Surfae Brass / Chrome
Ojiji Mountlọ ịsa ahụ nke mgbidi
Ne mbukota ahịa chọrọ
mpụga Mbukota Elu aja aja stronge igbe
Oge Mbuga ozi Bọchị 35 mgbe TT gasịrị
Mentkwụ ụgwọ 30% TT + 70% TT
MARA: nabata ahịa dị iche iche
Anyị kwenyesiri ike na site n'ịgbalịsie ike, azụmahịa dị n'etiti anyị ga-ewetara anyị uru abụọ. Anyị nwere ike obi sie gị ngwaahịa mma na asọmpi ọnụahịa maka China Bathroom Hang Robe Hook Single Chrome Finish Towel Hook, N'ịbụ onye ụlọ ọrụ na-eto eto na-arịwanye elu, anyị na-anwa ike anyị kachasị mma ịbụ onye kachasị mma.
China Bathroom Ngwa, Towel nko, Anyị nwere ihe karịrị 10 afọ ahụmahụ nke mmepụta na mbupụ azụmahịa. Anyị niile na-azụlite na imewe iche iche nke akwụkwọ na ngwaahịa na ngwọta izute ahịa ina na-enyere ndị ọbịa nọgidere site na-emelite anyị agbanwe agbanwe. Anyị na-na pụrụ iche na emeputa na ekspootu na China. Ebe ọ bụla ị nọ, biko sonyere anyị, ọnụ anyị ga-enwe ọdịnihu dị mma n'ọhịa azụmahịa gị!
Tụkwasịnụ Ikike: 49000 Ibe / iberibe kwa ọnwa
Nkọwa nkwakọ ngwaahịa ： 1.Flocking igbe 2..Window agba igbe 3.Ipụpụ igbe
AKW COMKWỌ AKWPKWỌ
Typedị azụmahịa Emeputa & Trading Company Mba / Mpaghara Zhejiang, China
Main Ngwaahịa Ime ụlọ ịwụ Inwe Onwe Onye
Ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ 51 - 100 Ndị mmadụ Onu ogugu Ego Kwa Afọ 5 nde USD
Afọ Guzosie Ike 2005 Asambodo IOS9001: 2015, OA, ROHS
Asambodo Ngwaahịa IOS9001: 2015, OA, ROHS Ikike nchọpụta Eeh
Ụghalaahịa Cavoli Isi Ahịa South America40%
N'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ Asia 10%
Ndị ọzọ na- 20%
CAVOLI bụ otu n'ime ndị na-eduga ụlọ ịsa ahụ ngwa emeputa na ekspootu na Wenzhou obodo ihe karịrị afọ 15. Anyị isi nso ihe bụ Zinc Alloy ， Brass ， 304SS na dị iche iche yi Finishs （Chrome el Nickel nchacha ， Black ， Orb na na W .Anyị bụ na-atụ anya ịnata ajụjụ n'aka gị wee bụrụ ezigbo onye na-ebubata ngwaahịa na china nwere ezigbo mma na asọmpi asọmpi！
Dị ka ọkachamara emeputa ， CAVOLI anabata OEM & DM. Anyị na-aga ọ bụla Canton Fair, KBC Fair na ndị ọzọ na mba ahia fairs。
Isi ahia bụ North Ameries ， South America Europe na Mid East。
Anyị bụ ndị ụlọ ọrụ ọkachamara na mmepụta nke ngwa ịsa ahụ maka afọ iri na ise.
Q2: Gini bu ahia gi?
Anyị na-ahụ maka ịmịpụta akwa zinc alloy + igwe anaghị agba nchara, ọla, 304SS na ngwaahịa aluminom eji na ime ụlọ ịwụ.
Q3: Whtat bụ MOQ?
Nọmalị, MOQ 300pcs / item.QTY opekata mpe 100 PC / ihe maka usoro nlele ma ọ bụ usoro nzọ ụkwụ. (anyị ga-atụle ngụkọta nke iji)
Q4: Gịnị bụ ugwo usoro?
Site T / T, 30% nkwụnye ego na 70% itule ga-akwụ ụgwọ tupu Mbupu si factory.We'll egosi gị foto nke ngwongwo tupu ị na-akwụ itule.
Q5: Ogologo oge ole bụ oge ndu?
Nọmalị ọ na-ewe 35 -45 ụbọchị mgbe anyị natara nkwụnye ego gị. (n'ezie ọ dabere na ọnụọgụ nke iwu)
Q6: nnyefe nnyefe?
a na-enye ihe nlele site na ụgwọ ezi uche dị na ya.
Q7: Okwu nke mbukota?
Na nkịtị, Maka ihe ọ bụla, anyị na-ebu igbe ọcha na katọn aja aja. Maka 6 pcs setịpụrụ, anyị na-etinye na Foam / Flocking + Window windo ma ọ bụ igbe onyinye onyinye.
Ọ bụrụ na ị debanyere aha akwụkwọ ikike iwu kwadoro, anyị nwere ike iburu ngwongwo na igbe igbe gị ama ama mgbe ị nwetasịrị akwụkwọ ikike gị.
Q8: Okwu nke delibery?
Q9: Kedu ka ị si eme azụmahịa anyị ogologo oge na ezigbo mmekọrịta?
1.CAVOLI na-enye ezigbo mma na asọmpi ego iji hụ na ndị ahịa anyị benifit, iji nyere ha aka imeri ahịa ahụ.
Otu 2.CAVOLI na-asọpụrụ ndị ahịa ọ bụla dịka enyi anyị ma na-eme ihe kachasị mma iji kwado ha na-azụ ahịa na dịka ezinụlọ, n'agbanyeghị iwu nnukwu ma ọ bụ obere, ebe ha si.
Obodo Tangxia, Wenzhou City, Zhejiang Province, China
Nke gara aga: 94300-New Hotel & Home Design Brass mposi ụlọ ịwụ ngwa ngwa ụlọ ịwụ ngwa 6 iberibe set
Osote: 94400-European Design Bath Hardware Set Brass Bathroom Ngwa
23000-Zinc + igwe anaghị agba nchara / Chrome Sanitary Ware ...
95200-Wenzhou Manufacturer Nanị Hotel Bath Ro ...
91300-Aluminium / Polished / ọxịdashọn China suppli ...
78100-New Hotel & Home Design Zinc + igwe anaghị ...
62200-athlọ ịwụ ngwa Zinc nghọta Double ...